संसदलाई प्रधानमन्त्री ओलीको बेवास्ता ! « रिपोर्टर्स नेपाल
संसदलाई प्रधानमन्त्री ओलीको बेवास्ता !
प्रकाशित मिति : 2019 September 19, 10:19 pm
काठमाडौं, २ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदप्रति अनउत्तरदायी देखिएका छन् । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशनको अन्तिम दिन सम्बोधन गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । आजको बैठकको तेस्रो चरणको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम हिजै तय भएको थियो ।
तर, उनले अन्तिम समयमा आएर सम्बोधन स्थगित् गरेका छन् । धेरैले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका कारणले आजको सम्बोधन स्थगित् गरिएको हुनसक्ने अनुमान लगाए । तर, प्रधानमन्त्री भने प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बन्ने दुई भवन शिल्यान्यासमा सहभागी भएका थिए । यसो हुँदा उनी स्वस्थ नै भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो, राप्रपाका राजेन्द्र लिंगदेन, नेमकिपाका प्रेम सुवाललगायत नेताहरुले संसदलाई सम्बोधन गरेका थिए ।
नेकपाको तर्फबाट संसदीय दलका उपनेता सुवास चन्द्र नेम्वाङले सम्बोधन गरे । प्रधानमन्त्री ओली भने पछिल्लो समय संसदका बैठकमा निकै कम मात्रै सहभागी हुने गरेका छन् । कतिपयले त प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदप्रति त्यति तृष्णा नभएको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आज संसदको अन्तिम दिन आएर सम्बोधन नगरेकोमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुसमेत रुष्ट छन् । प्रधानमन्त्रीमात्रै होईन, सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरु आजको अन्तिम बैठकमा सहभागी भएनन् । उनीहरुपनि गैरजिम्मेवार देखिएको नेकपाका एक सांसदले रिपोर्टर्स नेपाल डटकमसँग भने ।
Photo : Mukunda Kalikote/ReportersNepal